Nayakhabar.com: हेल्लो सरकार ! काठमाडौंमै ठगियौं, न्याय चाहियो
हेल्लो सरकार ! काठमाडौंमै ठगियौं, न्याय चाहियो
काठमाडौं । एयरपोर्ट वरपर युवाको एउटा समूह १५ दिनदेखि दिनभरि यता उता भौंतारिरहेको छ । यो समूहमा संखुवासभाका ८ युवक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा लागि दुबई जनका लागि घरबाट विदावारी भएर आएका उनीहरु ‘घर न घाटको’ भएका छन् ।
उनीहरु साझा पीडामा छ, विदेश गएर पैसा कमाउने सपना तुहियो । त्योभन्दा ठूलो पीडामा उनीहरु यसकारण छन् कि ऋण गरेर भेरिकर्णाली म्यानपावरलाई बुझाएको ठूलो रकम ठगिएको छ । रकम बुझेपछि म्यानपावरका निर्देशकलाई त्यही संस्थाले ‘मेरो मान्छे हैन’ भन्दै पन्छिन खोजेको छ । तर, यसलाई म्यानपावरले बुनेको जाल मान्छन्, ठगिएका युवाहरु ।
कोठाको ओछ्यान असरल्ल थियो । ‘टीभी हेर्नेबाहेक के नै काम छ र, म्यानपवरले धोका नदिएको भए यतिबेला दुबईको स्टार होटलमा वेटरको काम गर्दै हुन्थ्यौं होला’ एक युवकले गुनासो पोखे ।
प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले १६ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि ठगिएका उनीहरु ठूलो तनावमा छन् । त्यसैले ठगी गर्ने म्यानपावर र रकम लिएर बेपत्ता भएका निर्देशकलाई कारवाही गर्न र आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै उनीहरु विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् ।
तर, उनीहरुले सहयोगको अपेक्षा पाउने बचनभन्दा बढी तिरस्कार र अपमान भोगिरहेका छन् । तैपनि गुमेको पैसा फिर्ता पाइने झिनो आश मारेका छैनन् । यो खबर उनीहरुले घरमा भनेका छैनन्, किनकि ऋण गरेर लिइएको रकम ठगिएको कुराले तनाव मात्रै दिन्छ । त्यसैले कुराकानीमा उनीहरुले आफ्नो परिचय सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरे ।
कसरी ठगियो ?
ठगिएका आठ युवामध्ये ६ जना यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किसकेका हुन् । २ जना भने पहिलोपटक विदेश जाने योजनामा थिए ।
विदेश जानका लागि उनीहरुले गाउँका एक युवकमार्फत भेरी(कर्णाली म्यानपावरमा सम्पर्क गरे । सम्पर्कमा आए म्यानपावरका निर्देशक नगेन्द्रबाबु आरसी । उनीसँग सम्पर्क गराउने युवक पनि ओमान जानका लागि त्यही म्यानपावरमार्फत प्रोसेसिङ गर्दै थिए ।
युवकहरु निर्देशक आरसीलाई भेट्न भेरिकर्णाली म्यानपावरको काठमाडौं मित्रपार्कस्थित कार्यालय आए । एक युवक भन्छन्(कार्यालयमा जाँदा त मोबाइल पनि लैजान नपाइने रहेछ । पुरै स्टान्डर्डसँग बसेको थियो त्यो निर्देशक । म्यानपावरको निर्देशकलाई नै भेटेर दुबई जाने भनियो । उनले पनि एक होटलका लागि डिमान्ड आएको छ भने ।’
म्यानपावरको निर्देशक भएको भिजिटिङ कार्ड नै देखाएपछि उनीहरु विश्वासमा पर्नु अस्वभाविक थिएन । त्यसपछि उनीहरुले भिसाका लागि पासपोर्ट बुझाए । केही दिनमा भिसा आएको खबर आयो र उनीहरु काठमाडौं आए । फ्लाइट फिक्स भएको भन्दै फोन गरेपछि दुई हप्ता अघि नै आठै जना युवा घरबाट विदा भएर निस्कएका थिए उनीहरु । म्यानपावरमा गएर बुझ्दा दुबईको रोयल प्यालेस होटलका लागि भिसा लागेको कागज देखाइयो ।
म्यानपावरका निर्देशक आरसीको भिजिटिङ कार्ड र देखाइएको भिसाको कागजपत्र महिनामा ४२ हजार कमाइ हुने, ओभर टाइम पाइने लगायतका आश्वासन दिइयो । त्यसपछि खर्चबारे बुझ्दा सुरुवातमा २ लाख ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने म्यानपावरले बतायो । उनीहरु पैसा लिएर म्यानपावर पुगे । तर, म्यानपावरमा पैसा लिँदा समस्या हुन्छ भन्दै खातामा पैसा हाल्न भन्यो । त्यसैअनुसार उनीहरुले रकम जम्मा गरिदिए । उनीहरुसँग रकम जम्मा गरेको रसिद साथैमा छ ।
तर, जब पैसा बुझे म्यानपावरको बोली फेरिन थाल्यो । सुरुवातमा उनीहरुलाई फ्लाइट क्यान्सिल भयो भनेर केहीदिन कुर्न भनियो । होटलमा ७ हजार रुपैयाँ तिरिदिएर नउडुञ्जेसम्म आफ्नै खर्चमा राख्ने आश्वासन दियो ।
गत सोमबार सोमबार बेलुका निर्देशक आरसीले फोन गरेर आफू टिकट काट्न ट्राभल एजेन्सीमा रहेको र आफूलाई थकाइ लागेकाले मंगलबार विहानै टिकट होटलमै ल्याइदिने बताएका थिए । तर, मंगलबार विहान उनको फोन स्वीच अफ भयो । त्यही पनि उनीहरु आत्तिएनन् र हवाइ टिकेट लिन म्यानपारको कार्यालय पुगे ।
तर, म्यानपावरले उनीहरुलाई भित्र छिर्न दिएन र भनियो निर्देशकले १ वर्षअघि नै काम छोडेका हुन् । १५ दिन अघि मात्रै त्यही अफिसमा उनीहरुले निर्देशक आरसीलाई भेटेका थिए । उनको कोठामा निर्देशकको बोर्ड झुण्ड्याइएको थियो । म्यानपावरको सञ्चालकलाई भेटौं भन्दा निर्देशक आरसीले आफ्नो भाउजु हुन् भन्दै आफूलाई भेट्दा हुने भन्दै टारेका थिए ।